Yaa Gacanta ugu hortaagay ansixinta Aaran Jaan | allsanaag
Yaa Gacanta ugu hortaagay ansixinta Aaran Jaan
26th May 2019 admin Category :
Gudoomiyaha Baarlamaanka Puntland Ma Aaran jaan buu u shaqeeyaa.
Daawo Gudoomiyaha Baarlamaanka Puntland Cabdixakiin Maxamed Axmed (Dhooba–daareed) ayaa ugu hor gacan taagay in la ansixiyo Dawladda Cabdiraxmaan Farioole Iyo Shido soo dhiseen . Gudoomiyaha Baarlamaanka Dhooba daareed ayuu ahaa ninkii ansixiyey in duuduub wax lagu ansixiyo.
Gudoomiyaha Baarlamaanka Puntland ee hadda xilka haya Cabdixakiin Maxamed Axmed (Dhooba–daareed) ayaa wuxuu noqonayaa Gudoomiyihii ugu horeeyey ee la hor keeno Gole wasiiro oo la sii dhaariyey , kalsooni laga qabo awgeed . Hadaba Gudoomiyhu ma dano koox gaar ah ayuu u shaqeeyaa mise umadda Puntland
← Wasiir ku xigeenka amniga Puntland Xildhibaaanada Puntland ma yihiin kuwa guta waajibaadkooda mise waa kuwa u adeega Madaxweynaha? →
One thought on “Yaa Gacanta ugu hortaagay ansixinta Aaran Jaan”
Safia Mohamed February 17, 2019 at 12:10 am
Dhoobo daareed waa ina shido sodogi oo waa kii gabadhiisa furay marka isba waa aaran jaan kama bixi karo aaran jaan xilkana isagaa la fududeeyey marka waa dameer iyo labadiisaa dhagood